Itti aanaa gaazexaa Sayifa-nabalbaal waggoota sadiin dura ggurame irratti himannaan dhiyaatuu maddeen gabaasan.
(Madda Oduu ABO/MOA/Bitootessa 10,2009) Mootummaan Wayyaanee gaazexaa Sayifa-nabalbaal, kan waggoota sadihiin dura gabaa Pireesii irraa uggureef itti aanaa qopheessaa kan tahan obbo Asraat Wadaajoo irratti himannaa dhiyeessuu maddeen Finfinnee gabaasan.
Sababaan Obbo Asraat itti yakkamaniif, waggoota sadihiin dura, ALH Caamsaa 20 bara 1996 Gaazexicha irratti oduu sobaa maxxansaniiruu kan jedhu dha.
Oduun yeroo ibsame kanatti gaazexaa Sayifa-nabalbaal irratti maxxanfame kan wayyaanoni soba jedhaniin, “ALH bara 1984 irraa kaasee ilmaan Oromoo sababa deggartummaa ABOtiin hidhaman keessaa kanneen maatiiwwan isaanii fi waldaa Fannoo Diimaatin hin daawwatamin jiraachuun ibsame.” kan jedhuu akka tahetu hubatame.
Gaazexaa Sayifa-nabalbaal irra waggoota 7f I/A qopheessaa tahuun kan hojjetan obbo Asraat Wadaajoo gama isaaniitin, “Bakka Qopheessaan gaazexichaa biyya hin bahinii fi hin du’initti itti aanaa qopheessaa himachuun doorsisa tahe jedhamee raawwatamee dha.” jedhan.
Obbo Asraat dhimma gaazexaa hojii irraa ugguramee waggoota dheeraan booda kaasanii himannaa dhiyeessuun sirrii akka hin taanee fi daandii seeraa kan hin eegnee dha jedhan. Erga oduun hojjetamee waggoota 5 booda himannaa dhiyeessuun kanneen gara hojii pireesiitti seenuu barbadanii fi hojjechaas jiran doorsisuu fi rifachiisuuf mootummaan tahe jedhee gocha seera hin taane kana raawwataa kan jiru ta’uu ibsan.
Gaazexaan Sayifa-nabalbaal waggoota sadihiin dura kan hojii irraa uggurame oduu sobaa dhiyeesse, arraata ABO ti kan jedhuu fi himannaalee dharaatiin tahuun ni beekkama.
Namoonni dhukkuba HIV/AIDSn qabamanii fi dhukkuboota biroon rakkachaa jiran tajaajila gahaa argataa akka hin jirre dhagahame.
(Madda Oduu ABO/MOA/Bitootessa 10,2009)MOA Finfinnee irraa akka ifa godhutti sirni wayyaanee namoota dhukkuba HIV/AIDS qabanii fi dhukkuboota biroon hubamaa jiraniif wal’aansa kennaa hin jiru. Dhukkoboonni akka TBs Oromiyaa keessatti babal’atuun ummata fixaa jira.
Hogeeyyota fayyaati je’amanii namoonni Oromiyaa keessa bobbaafaman kanneen ogummaa hin qabne dabballoota wayyaanee akka tahanis odeessi kun ni mirkaneessa. Manneen fayyaa jiranis meeshaalee fi qoricha waan hin qabneef, dhukkubsattoonni wal’aansa dhabanii dhumatan lakkooysi isaanii akkaan dabalaa jira. Hogeeyyonni fayyaa gahumsa qaban sababaa deeggartoota dhaabilee siyaasaa ti je’uun doorsifamaa waan jiraniif ogummaa qabaniin ummmata tajaajiluu akka dadhabanis odeessi kun ifa godha.
Qorichi talaallii daa’immanii fi dubatootaaf kennamus kan yeroo itti dabre waan ta’eef, rakkoo biraa dhalchuun himameera. Sagantaa karoora maatii kan jedhu Oromiyaa qofa irratti xiyyeeffatamuun dubartootni Oromoo akka hin deenyeef qorichi itti raabsamaa akka jiru illee oduun kun dabalee hubachiisa. Dhaabni jalee wayyaanee OPDOn shira ummata Oromoo irratti dalagamaa jiru kana dhaabsisuu irra dhoysaa akka jirtus odeessi kun dabalee mirkaneessa.
Godina Shawaa Lixaa Ona Walmaraa keessatti dhibeen mananjaayitis dhalatee ummata gaaga’aa jira.
(Madda Oduu ABO/MOA/Bitootessa 10,2009) Dhukkubni buqoo goysaa ykn Meningicocal Meningitis je’amu kun Ona Walmaraa ganda qotee bulaa Sokorruu Awwaasootti dhalachuun ummata gaaga’aa jira. Hoggeeyyonni fayyaa batalumatti gargaarsa mootummaa gaafatanis dhumaatii ummata kan hawwu sirni wayyaanee dirmannaan godheef tokko illeen akka hin jirre odeessi kun ifa godha.
Dhukkubni yeroo duraaf namoota 25 qofa irratti mul’ate kun yeroo ammaa haalan babala’chaa akka jirus beekuun dandahamee jira. Mootummaan gabroomsaa wayyaanee diinummaa irraa ka’ee duula ajjeechaa, hidhaa fi saamichaa ummata Oromoo irratti adeemsisuun cinatti, dhukkuboonni daddabroon wayta dhalatus dhukkubicha dhoysuun hubaatii hammana hin je’amne geessisaa akka jiru beekkamaa dha.